I-VIRURL: Okuqukethwe okuxhasiwe nokwabelana komphakathi okukhokhelwayo | Martech Zone
I-VIRURL: Okuqukethwe okuxhasiwe nokwabelana komphakathi okukhokhelwayo
NgeSonto, Novemba 25, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Siyakhokhela ukusatshalaliswa kokuqukethwe futhi sikhokhela izikhangiso ezivaliwe nezingaphandle. Kubalulekile ukuthola okuqukethwe kwethu phambi kwezithameli eziningi - futhi sithola ukuthi ukubekwa kwekhwalithi ephezulu kusitholela izivakashi ezimnandi nezifanele ezihlala zikhona. Njengoba i-Facebook inyusa ukukhushulwa okukhokhelwayo, iGoogle iyaqhubeka nokuncipha impahla ethengiswayo, futhi izinjini zokucinga ziyaqhubeka nokulwa namaqhinga avela kubachwepheshe be-SEO abakhohlisayo, abahlinzeki bokuqukethwe bathola ithuba lokukhokha ukuze badlale ngezinye izindlela ezincane kakhulu.
Kuyadumaza kimi ukusho lokho. Ngiyayithanda intando yeningi ye-Intanethi namandla ayo okukhiqiza imiphumela kumfana omncane owayengenakukwazi ukuya ekhanda ngokuncintisana okukhulu. Namuhla, kusengenzeka ukuthi inkampani encane ikwenze kube kukhulu online - kepha njengoba izakhiwo ze-Intanethi zibheka ukwenza imali ngawo wonke amathuba, lawo mathuba ayancipha futhi namathani wokukhokha akhokhelwa kakhulu ayanda.
IVIRURL icebo elithile elihlukile. Esikhundleni sokukhokha lezi zinsiza ukukhuthaza nje imininingwane yakho, i-VIRURL ingeza ithuba labathonya bezenhlalo ukuthi bakhokhelwe ukuze babelane ngezixhumanisi namanethiwekhi abo.
IVIRURL isabalalisa ama-athikili namavidiyo axhasiwe kuwebhu yonkana ngamawebhusayithi adumile nabantu abanethonya. Ipulatifomu yethu yokuzenzela ivumela abakhiqizi bezindaba abaku-inthanethi ukuthi benze imikhankaso yokukhangisa yendabuko ngendaba yokuchofoza. Izikhangiso ze-VIRURL zihlanganiswe ngenethiwekhi yethu enkulu futhi ekhulayo yabashicileli bewebhusayithi nabathonya bezokuxhumana, ukukhulisa okuqukethwe kozakwethu ezigidini zabantu abazibophezele kakhulu.
Okuqukethwe okuxhasiwe kwe-VIRURL kuhlanganiswe ngamaqembu amabili abasebenzisi:
Abashicileli bewebhusayithi, abasingatha iwijethi yeVIRURL kusayithi labo ukusebenzela izethameli zabo ngokuqukethwe okuxhasiwe okuvela kwinethiwekhi yeVIRURL.
Abashushisi bezenhlalo, ababelana ngezixhumanisi ze-VIRURL nabalandeli babo bezokuxhumana abazinikele kanye nabafundi be-blog. IVIRURL ithi inabagqugquzeli abangu-110,000 ababhalisile.
Qaphela: Sihlola i-VIRURL futhi sisebenzise isixhumanisi sethu esixhasiwe kulokhu okuthunyelwe.
Tags: ukuthanda okukhokhelweizimpendulo ezikhokhelwayoukwabelana okukhokhelwayoukubukwa okukhokhelwayoi-virurl
Faka i-Edit-In-Place kunoma yiluphi uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe
Nov 25, 2012 ngo-11: 26 PM
Ngiyabonga lapho ungenisa nge-VIRURL.